စီမံကိန်းများ, ရှေ့ပြေးပုံစံ - Rikoooo
AltraMax FSX & P3D ဒေါင်းလုပ်
Downloads:4601
Size: 31.1 ကို MB
11 မတူညီတဲ့မူကွဲနှင့်အတူခရစ် Pyatt အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး Ultralight စမ်းသပ်လေယာဉ်ပျံ။ http://kp-coolstuff.com/3d_project3: သင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ဤစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရနိုင်။ အပြည့်အဝ 3D အတွက်လုပ်ပါတယ်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးသတ်မှတ်မည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ: ထိုင်ခုံ = 1, မက်စ်။ အချည်းနှီးသောအလေးချိန် (Powered တစ်ဦးက ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Krispy1001 (Kris Pyatt)
1701 သင်္ဘော USS Entreprises အခြား 2.0 FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 15 231
ဤတွင်ငါးနှစ်ကြာ၏ Interstellar တူးဖော်ရေးတစ်မစ်ရှင်နှင့်အတူတရားစွဲဆိုကပ္ပတိန်က Kirk ၏နာမည်ကျော်အာကာသသင်္ဘောကိုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။FSX / P3D - NCC-1701 သင်္ဘော USS ENTERPRISE - Star Trek - အခြား Reality (2009) - V2.0The updated version ကို NCC-1701 သင်္ဘော USS Enterprise ကို။ updated မော်ဒယ် VC ကို, texture အပါအဝင်အပြည့်အဝ pack ကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်း4YSS-1000 ဖုံးကိုဓားရှည် Starfighter FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 12 488
Size: 12.6 ကို MB
Halo4အ Halo series တွေအတွက်သတ္တမဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ YSS-1000 အထင်ကြီးစွမ်းရည်များနှင့်အတူဂိမ်းထဲမှာဖွင့ ်. နေတဲ့အာကာသယာဉ်တိုက်လေယာဉ်၏! အရူးအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဒီစက်ကိုထိနျးခြုပျဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်ပါ။ အဆိုပါမော်ဒယ်ဂရပ်ဖစ် EFF နှင့်အတူထည့်သွင်းအရည်အသွေးမြင့်မားဖြစ်ကြ၏, ဂိမ်းရန်အလွန်သစ္စာရှိသောသူသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဘရုစ် Fitzgerald, ရော့ Barendregt
Battlestar Galactica TOS Two-Pack ကို FSX အရှိန် HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 10 693
Size: 8,65 ကို MB
သာ FSX-AccelerationBATTLESTAR GALACTICA TOS Two-PACKTwo လေယာဉ်တင် pack ကိုလွှတ်ပေးရန်။ ဇုလေကြောင်း Viper SF.MK.II နှင့်ဆိုက်ဘာ Aero CR-14 RAID Craft ။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ origional Battlestar Galactica တီဗီစီးရီးထဲကနေဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးယာဉ်များမှာ FSX acceleration ဇာတိနှင့်ထုံးစံ gauge, VC ကိုရဲ့, မျိုးစုံအမြင်များ, ပါပြီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ တိ Piglet Conrad - Piglets ထူးခြားသောလေယာဉ်
မြောက်အမေရိက xB-70 ဘော့နာဆာ FSX & P3D HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 19 639
Size: 18.6 ကို MB
အ FS2004 သဟဇာတမူကွဲများအတွက် afteburner အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင်ဖို့ herePress "L" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါ 2D လေယာဉ်မှူးအခန်းက virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းထက်ပိုပြည့်စုံသည်အဆိုပါမြောက်အမေရိက xB-70 Valkyrie အမေရိကန်နှောင်းပိုင်း 1950 ၏ရှေ့ပြေးပုံစံအသံထက်မြန်ဗုံးခွဲသူခဲ့သည်။ ဒါဟာမြောက်အမေရိကကဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုသာအုပ်ရေအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့ကြ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Massimo Altieri, ဘော့ Chicilo အားဖြင့် update ကို
installer version ကို 8
Sus Scrofa SS-4P FSX ဒေါင်းလုပ်
Downloads:9263
Size: 10.6 ကို MB
လေးထိုင်ခုံတာဘိုပရော့ Tour / အားကစား / သင်တန်းဆရာလေယာဉ်ပျံ။ ဒီဇိုင်းနှစ်ခုဆေးသုတ်အစီအစဉ်များ, ထုံးစံအထွာအပေါင်းတို့နှင့်တကွသောအခြားပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်ဤ "လျှင်အဘယျသို့" ။ ဆေးသုတ် Kit ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကို virtual cockpit ကောင်းစွာဒီလေယာဉ်ကို VC ကိုမှတစ်ခုတည်းကိုသာထိန်းချုပ်ထားမြတ်သောအကြီးမားသည်နှင့်နိုင်၏, လုပ်ပါတယ်, ထိုသို့သက်သာခံစားရသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ဘိုးအင်း 7072 Orion အသံထက်မြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး FSX HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 18.37 ကို MB
ဤတွင်အနာဂတ်ဘိုးအင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ... ဒီဒီ add-on နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် '' 2001, ထိုအာကာသ Odyssey '' ကနေစိတ်ကူးယဉ်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ် autopilot engaged.It နှင့်အတူ Mach 1.5 နှင့် 50,000 ပေအထိစမျးသပျခဲ့အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေး, ကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းဖြစ်ပါသည် သင်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှတွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်မော်ဒယ်လ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, မရှိ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ တိ Piglet Conrad